Echebe eriri laser ọnwụ igwe OR-P - China Shandong Oree Laser
Echebe eriri laser ọnwụ igwe OR-P
Home Iji eriri Laser Cutting Machine OR-S
Sọrọ-eji mpempe akwụkwọ & tube eriri laser ọnwụ MACHI ...
The-echebe eriri laser ọnwụ igwe jiri mere n'ụzọ zuru ezu nchọ laser echebe cover, igba ígwè bed, yinye mgbanwe n'elu ikpo okwu na ọkachamara CNC ọnwụ usoro inye ọrụ dị ike ọnwụ ike na arụmọrụ. N'otu oge ahụ, n'elu dị n'akụkụ na iwu siri ike nzukọ usoro hụ na igwe dị mma, oru oma na elu-nkenke anụ ọrụ.
Tụkwasịnụ ike: 250 Set / È kwa ọnwa
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: L / CD / AD / pt / T
1.A ujo eguzogide gantry style laser wuru maka ulo oru eji;
2.A elu arụmọrụ laser ngwugwu ekwekọghị na a ihuenyo mmetụ akara ike bụghị naanị; a ụwa klas laser CNC kamakwa a mpempe nkà;
3.Automatic elu ukpụhọde na-eme na Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo mgbe nile huu quality pụta;
4.The wifi onwem ikwe ka igwe-enweta online na-enye ohere maka ime ikiri;
5.Adopt Japan Yaskawa servo moto, High nkenke mbubata ogbe;
6.Laser dị n'ime a eriri optic cable (dịghị enyo ịgbanwe);
7.10x nta ntụpọ nha karịa 10.6um CO2 ụdị lasers;
8.Solid ala laser dịruru n'elu 50,000hrs;
9.Various ike nhọrọ si 500W ka 3kW (ndabere 500W);
10.Optional full okụre ma ọ bụ na-emeghe-bed imewe.
Exchange ikpo okwu
The igwe na-onwem na ihe gbanwere abụọ na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu. Na-arụ ọrụ na otu table, na ndị ọzọ n'elu ikpo okwu nwere ike mara na butuo mpempe akwụkwọ workpiece.
The metal laser ọnwụ igwe echebe cover nwere àgwà nke siri ike Ọdịdị, ezi uche, na-enweghị mkpọtụ, nnukwu ọrịa strok, ngwa ngwa ije na ogologo ọrụ ndụ. Ọdịdị ga-abụ ihe mara mma, na mmetụta bụ izere ndị mebiri mere site metal ájá na njedebe nke nhazi.
The nkedo ígwè bed
flake graphite igba ígwè na a kacha nta ike ọdụdọ nke 200 MPa. High carbon ọdịnaya, compressive ike na ekweghị ekwe. High ujo absorption na-eyi ndị na-eguzogide. Good mgbatị arụmọrụ ma ọnwụ arụmọrụ. Nọgidenụ na izi ezi nke igwe na ngwá ọrụ a ogologo oge, na-agbanweghi agbanwe ruo afọ 50.
guzo-naanị electric akara kabinet
A kabinet na-ekewa eletriki ume dị iche iche na ọrụ na a na-emejuputa atumatu oru site dị iche iche na sekit na sekit na-akpọ a ike nkesa kabinet. N'ikwu ya n'ozuzu, ọ ga-egosi na ike nkesa kabinet usoro. Isi ọrụ nke onwe ha electric akara kabinet imewe bụ ịchịkwa mmalite na-akwụsị nke moto. Ke adianade do, o nwere ike ịchịkwa ọnọdụ na-agba ọsọ ọsọ nke moto. Mgbe moto ada ada, ọ bụ nnọọ adaba na ngwa ngwa ịrụ kpatara nchọpụta na kpatara nchoputa. Ihe bụ ihe ọzọ, ihe niile ọkụ mmiri na lasers na-wuru n'ime onwe ha akara kabinet n'ihi na ájá na-àmà imewe ka mma ndụ nke eletriki mmiri.
ọrụ Area 3000 * 1500mm 4000 * 2000mm 6000 * 2000mm
Pepeat Repositioning Accuracy ± 0.03mm ± 0.03mm ± 0.03mm
Nke ziri ezi na nke n'ọnọdu ± 0.02mm ± 0.02mm ± 0.02mm
Oke Speed 120m / min 120m / min 120m / min
ọrụ Isiokwu agụba table agụba table agụba table
Oke osooso 1.5G 1.5G 1.5G
Previous: Tube eriri laser ọnwụ igwe OR-T
Osote: Laser osise igwe OC
ọrụ Area 1500 * 3000mm 2000 * 4000mm 2000 * 6000mm
Akụkụ (L * W * H) 9950 * 3050 * 2100mm 11000 * 3600 * 2100mm 13600 * 3600 * 2100mm
ibu 8000kg 10000kg 11500kg
Megharịa n'ọnọdu Accuracy ± 0.02mm
Nke ziri ezi na nke n'ọnọdu ± 0.03mm
Max. Movement Speed 170m / min
Max. ọnwụ Speed 80m / min
Max osooso 1.5G
Kpọmkwem voltaji na ugboro ole 380V / 50Hz / 60Hz / 60A (Customizable)
Acryli Laser Ịcha Machine
Alloy Laser Ịcha Machine
Alloy Steel mpempe akwụkwọ Laser Cutting
Aluminum Fiber Laser Ịcha Machine
Aluminium Laser Ịcha Machine
Brass Fiber Laser Ịcha Machine
Carbon Steel Fiber laser Ịcha Machine
CNC Laser ịcha Steel Machine
Ọla kọpa Fiber Laser cutter
Ọla kọpa Laser cutter
Iron Fiber Laser Ịcha Machine
Iron Laser Ịcha Machine
Laser cutter N'ihi Carbon Steel
Metel Laser Ịcha Machine
Nwayọọ Steel Fiber Laser cutter
Nwayọọ Steel Fiber Laser Cutting Machine
Nwayọọ Steel Laser Cutting Machine
Obere Laser Cutting Machine
Obere Metal Laser cutter
igwe anaghị agba nchara Fiber Laser cutter
igwe anaghị agba nchara Fiber Laser Ịcha Machine
Igwe anaghị agba nchara Laser cutter
Steel Fiber Laser Ịcha Machine
Steel Laser Ịcha Machine
LIGHT idokwa tube laser ọnwụ igwe OR-TL
EXCHANGE Isiokwu mpempe akwụkwọ & tube eriri laser Cu ...
Elu ike eriri laser ọnwụ igwe OR-H
Tube eriri laser ọnwụ igwe OR-T
Exchange Platform cutter Fiber Laser Ịcha Ma ...